कोरोना संक्रमणका चरणहरु : नेपाल दोस्रोमा, कति खतरा ?
चैत्र २२, २०७६ १८:०५ मा प्रकाशित
''संक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्काे ,परिवारबाट परिवार हुँदै समुदायसम्म पुगिसकेको हुन्छ । ट्रेसिङ गर्न कठिन हुन्छ ''
काठमाडौं,२२ चैत । नेपालमा ३ महिनाको बिचमा ९ जनामा कोरानाको संक्रमण देखिएको छ । आज मात्रै तीन जनामा संक्रमणको पुष्टि भयो भने पछिल्लो १३ दिनमा ८ जनामा संक्रमण भेटिएको छ । ८ जनामा देखिएको संक्रमण आयातित हो भने एक जनामा स्थानिय संक्रमण । यो संगै नेपाल संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसले जोखिम बढाएको छ । नेपालमा कोरोनाको उपचारमा अग्रणी भुमिका निभाइरहनु भएका शहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रवक्ता डा.अनुप बाँस्तोलासंग कुराकानी गरि तयार पारिएको यो सामग्री ।
१.पहिलो चरण (आयातित संक्रमण): जब प्रभावित देशमा गरिएको यात्रा ईतिहासबाट व्यक्तिमा संक्रमण भएको भेटिन्छ भने त्यो संक्रमणको पहिलो चरणको अवस्था हो । यसलाई आयातित संक्रमण पनि भनिन्छ । नेपालमा हालसम्मका आठ वटा संक्रमणको केस आयातित हो ।
२.दोस्रो चरण (स्थानिय संक्रमण) : जब कोरोना प्रभावित देशमा गरिएको यात्रा ईतिहासबाट संक्रमण भएको व्यक्तिबाट अर्काे व्यक्तिमा संक्रमण हुन्छ भने त्यसलाई लोकल ट्रान्समिशन अथवा संक्रमणको दोस्रो अवस्था मानिन्छ । अहिले नेपाल दोस्रो चरणमा छ । संक्रमित मध्ये एक जना महिलामा संक्रमित व्यक्तिबाट नै संक्रमण भएको छ । परिवारको सदस्यबाट परिवारमा नै सरेको नेपालमा यो पहिलो हो । चौथो संक्रमितबाट परिवारमा सरेको थियो । यसबाट समुदायसम्म संक्रमण पुग्ने खतरा उच्च रहन्छ ।
३.तेस्रो चरण ( समुदायमा संक्रमण) : संक्रमणको यो अवस्थासम्म आइपुग्दा संक्रमितको यात्रा इतिहास र संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्क इतिहास चाहिदैन । यसको मतलव संक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्काे ,परिवारबाट परिवार हुँदै समुदायसम्म पुगिसकेको हुन्छ । ट्रेसिङ गर्न कठिन हुन्छ ।
४. चौथो चरण (महामारी) : जब रोगले महामारीको रुप लिन्छ संक्रमण नियन्त्रण बाहिर हुन्छ । महामारीको अन्त्य कहिले हुन्छ त्यसको टुंगो हुँदैन । अवस्था विकराल हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले मार्च ११ अर्थात् फागुन २८ गते विश्वमा कोरोना भाइरस रोगलाई महामारीको घोषणा गरेको थियो । कुनै पनि देशले संक्रमण उच्च भई नियन्त्रण बाहिर गएमा आफ्नो देशमा पनि महामारीको घोषणा गर्न सक्दछ ।